स्वस्थ्य (Health) – khambuwan.org
Home स्वस्थ्य (Health)
in : स्वस्थ्य (Health)
के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने धारा छुट्दा छरिएर जाने, अण्डकोष सुनिने, गनाउने, नाइटोमुनि दुख्ने, वीर्य खस्दा पोल्नेजस्ता समस्या छ ? माथि मध्येका कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने एकपल्ट सोच्नैपर्छ कतै तपाईंलाई प्रोस्टेट ग्रन्थी (पुरुष वा प्रजनन ग्रन्थी) सम्बन्धी सङ्क्रमण त भएको छैन ? समयमै उपचार गरे सजिलै निको हुने …
डा. विनय रेग्मी युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो। यसले शरीरमा ‘एन्टी अक्सिडेन्ट’को काम गर्छ। तर, युरिक एसिडको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ। युरिक एसिडलाई एक प्रकारको बाथरोगका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले जोर्नीहरुमा अत्याधिक दुखाइ गराउँछ। रगतमा युरिक एसिड बन्ने र युरिक एसिड पिसाबबाट बाहिर निस्किने प्रक्रियामा गडबडी भयो भने …
डा. मिलन प्रकाश श्रेष्ठ,वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ बढ्दो आधुनिकिकरणले जीवनशैली जति सहज बनाएको छ । मानव स्वास्थ्यमा नयाँ समस्या पनि निम्त्याइरहेको पाइएको छ । सन्दर्भः हाई ब्लडप्रेसरको हो । कुनै समयमा आक्कलझुक्कल देखिने ब्लडप्रेसरको समस्या अहिले धेरैको साझा भएको छ । २० देखि ३० बर्षका जवानमा पनि यो समस्याको लागि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ब्लडप्रेसरका कारण मध्ये …
मेरुदण्डका नशामा कुनै कारण गडबडी हुनु वा दवाव पर्नुलाई नै नशा च्यापिनु भनिन्छ। पछिल्लो समय नशाको उपचारका लागि अस्पताल आउनेमध्ये अधिकांशको मेरुदण्डमा कम्मरको भागको चौथो र पाँचौँ अनि पाँचौ र छैटौँ हड्डीबीचमा तथा गर्धनका पाँचौँ, छैटौं र सातौँ हड्डीबीचमा नशा च्यापिएर समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ। वयस्क र वृद्धवृद्धालाई नशा च्यापिने समस्या बढी देखिने भए पनि यसले जुनसुकै उमेर समूहकालाई सताउँछ। …
पछिल्ला केही वर्षदेखि ल्याब परीक्षण गराउनेहरुमध्ये थाइराइडको परीक्षण नगराउने बिरलै होलान्। थाइराइड जाँच गराउनेहरुको संख्या हेर्ने हो भने, थाइराइडको समस्या बढिरहेको आँकलन गर्न सकिन्छ। तर, कुनै समस्या लिएर अस्पताल जानासाथ परीक्षण गर्नुपर्ने लिस्टमा थाइराइड नछुट्ने भएकाले यो समस्या बढेको देखिएको हो भन्ने तर्कलाई पनि नकार्न सकिँदैन। तपाईं बिरामी भएर उपचार गराउन जानु हुन्छ भने अधिकांश अस्पतालले तपाईंलाई थाइराइडको परीक्षण गर्न …
थाइराइले ल्याउन सक्छ महिलामा बाँझोपन, यस्ता छन् कारण
१० असार २०७४, शनिबार १०:२८
थाइराइड सम्बन्धी समस्याको अध्ययन गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी भएको पाइएको छ। अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययन अनुसार १ प्रतिशत महिलामा थाइराइड समस्या देखिएको छ भने पुरुषमा कुल जनसंख्याको शून्य दशमलब ०१ प्रतिशतलाई मात्रै। नेपालका ओपिडीमा आइरहेका बिरामीको संख्याको अनुपातलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यो पुष्टि हुन्छ। २० देखि ४० वर्षको उमेरमा थाइराइड हुने सम्भावना करिव २० प्रतिशत छ। यसको …
Total views : 109404